မြန်မာနိုင်ငံရှိ Hatchbacks ကားများ Carmudi Myanmar [Burma]
Chevrolet Daihatsu Ford Honda Kia Mazda Mitsubishi Morris Garages Nissan Peugeot Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
ခရမ်းရောင် / ပန်းရောင် (8)
A/C: Front (66)
Cassette Radio (66)
Silver Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Honda Shuttle Hybrid 2011
Black Honda Shuttle Hybrid 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ...
Pearl white Honda Shuttle Hybrid 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart...
Black Honda Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင...
Black Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင...
White Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်းပေ...
Black Honda Fit 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင...
Silver Honda Fit 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Pearl White Toyota Passo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Vitz 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Ractis 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Mitsubishi Colt 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Black Honda Insight Hybrid 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
မြန်မာပြည်တွင်း နောက်ဖုံးကား ဈေးကွက်
နောက်ဖုံး ကား လို့ ခေါ်တဲ့ Hatchback ကား အမျိုးအစား ဟာ မြန်မာပြည် မှာ အရေအတွက် အမြောက် အများ ရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် များလည်း ရှိသလို၊ အသစ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အများစု ကတော့ တစ်ပတ်ရစ် ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် နောက်ဖုံး ကားထဲမှာ လူသိအများဆုံး အမှတ်တံဆိပ်က တိုယိုတာ နဲ့ ဟွန်ဒါပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း က နာမည်ကြီး အောင်မြင်တဲ့ နောက်ဖုံးကား အချို့ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
နာမည်ကြီး နောက်ဖုံး ကားများ
တိုယိုတာ မှာ ဆိုရင် နောက်ဖုံးကား လည်း ဖြစ် အသေးစား ကားလည်း ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ဗစ်ဇ်က နာမည်ကြီး ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁၀၀ စီစီ၊ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ အစရှိသဖြင့် အင်ဂျင် အရွယ် အမျိုးမျိုး ရှိပြီး ဈေးကွက်မှာ လူကြိုက်များ ရေပန်းစားတဲ့ ကား တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း အားဖြင့်လည်း သက်သာ ပါတယ်။ သိန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင် ဆိုရင် အရည်အသွေး ကောင်းကောင်း တစ်ပတ်ရစ် ဗစ် ရနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုယိုတာ ထဲမှာ ကိုပဲ ယားရစ်စ်၊ ပရီးယက်စ်၊ ကိုရိုလာ နောက်ဖုံးဗန် တို့ လည်း ရှိပါ သေးတယ်။
ဟွန်ဒါ မှာ ဆိုရင် ရွေးစရာ ပိုများ ပါတယ်။ သူက ဟိုင်းဘရစ် မှာလည်း အောင်မြင် သလို၊ နောက်ဖုံးကားလည်း ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုက် ကားကို အတော်များများ သိကြ ပါတယ်။ သူက တိုယိုတာ ပရီးယက်စ် ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ကား ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က အင်မတန် ရေပန်းစား ပြီး ယနေ့မှာလည်း မှာသူ ပုံမှန် ရှိနေ သေးတဲ့ ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ထဲကနေ နောက်ဖုံးကားလည်း ဖြစ် အရွယ်သေး မိသားစု စီး ကားလည်း ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ ဖစ် ဆိုတဲ့ ကားလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ သူက တိုယိုတာ ဗစ် ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနဲ့ အင်ဂျင် အရည်အချင်း အရည်အသွေး တို့ကလည်း သိပ် မထူးခြား အောင် ရှိနေကြ ပါတယ်။ ဆူဇူကီး မှာဆိုရင် ဆွစ်ဖ် နဲ့ အခြားသော နောက်ဖုံးကားငယ် တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ဆွစ်ဇ် ကျတော့ ပိုမို အရည် အသွေး ကောင်းပြီး ဈေးလည်း ပိုကြီး ပါတယ်။
အခြားသော အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဘရန်း များလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ အခြားသော အမှတ်တံဆိပ် များစွာ နဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ နောက်ဖုံး ကားတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အမေရိကန် ဈေးကွက်၊ ဥရောပ ဈေးကွက် ကနေ ဝင်ရောက်လာတာ များ ရှိပါတယ်။
နောက်ဖုံးကား နှင့် မြန်မာပြည် ဈေးကွက်
နောက်ဖုံးကား ကို ကြိုက်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း က မိသားစုသုံး၊ မြို့တွင်းသုံး သုံးလို့ ရသလို နောက်မှာ ပစ္စည်း သိမ်းခန်း ကျယ်ကျယ် ဝန်းဝန်း ပါဝင် တာကြောင့်လည်း ခရီးသွားဖို့ အတွက် ဝယ်ကြ ပါတယ်။ အသစ် ထက် တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက်က ပိုပို သာသာ များပြား ပြီး ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက် ကနေ အများဆုံး ဝင်ရောက် နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တွေလည်း ဝင်ရောက် နေပါပြီ။ Motors.com.mm ကနေ တစ်ပတ်ရစ်၊ အသစ် သော နောက်ဖုံးကား အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။